JOIN ONE OF THE MOST REMARKABLE AND BIGGEST LEADERSHIP CONFERENCE IN MYANMAR
With Leadership Guru who will uncover their battle-tested secrets ..
Proven Leadership Strategies that stood the test of time
Help you break through critical areas of your life
Guide you to the success that you’re destined to have
A never-before seen state of living Leadership Guru, right here in Myanmar.
As the Myanmar’s leading educational services company, Myanmar Excellence Institute has been changing lives for more than5years. This year, we’ve decided that we’re bringing in the world’s Best Leadership Guru onto one Legendary stage in Myanmar.
John C. Maxwell isaNo. 1 New York Times bestselling author, coach and
speaker who has sold more than 30 million books in 50 languages. He has been
identified as the #1 leader in business by the American Management Association®
and the most influential leadership expert in the world by Business Insider. Often
called the country's No. 1 leadership authority, Maxwell was identified as the most
popular leadership expert in the world by Inc. magazine in 2014. And he has been
voted the top leadership professional six years inarow on LeadershipGurus.net.
He is the founder of The John Maxwell Company, The John Maxwell Team
and EQUIP,anonprofit organization that has trained more than5million leaders
in 180 countries.
၁၉၆၅ ခုနှစ် - ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ၀ါဏိဇ္ဖဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ် - Brighton University မှ Diploma in Managment Studies ဘွဲ့ လွန်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ် - University of Warwick မှ Operations Research ဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် - University of Machester Institute of Science and Technology ( UMIST ) မှ Managment Science ဘာသာရပ်ဖြင့် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဆရာဦးကျော်ကျော်လှိုင်သည် ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်မှ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ကို ရူပဗေဒ အထူးပြုဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ်အထိ ဘူမိရူဗေဒ အရာရှိအဖြစ် မြန်မာ့ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့ တွင် ဆလန်ဘာဂျာ အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Data Server Manager အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှီလာပြီး Smart Technical Service Company ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ဦးပြေခိုင်သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Multi-National Corporation (MNC) များဖြစ်သော IBM, HP, DBS Bank တို့ တွင် Consultant အဖြစ် ၈ နှစ် ကျော်ကြာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။။ ထို ၈ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း Technical Skills, Leadership, Coaching, Finance, Economic, Edication, Psychology (NLP) အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များကို လေ့လာခဲ့ရုံသာမက Sydney, Singapore, vietnam, Malaysis နှင့် Myanmar နိုင်ငံတို့ တွင်လည်း သင်တန်းများသွားရောက်ပို့ ချလျက်ရှိပါသည်။
သူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်အကျော်ကြားဆုံး Speakers, Trainers, Leaders များဖြစ်ကြသည့် Tony Robbins, Sir Richard Branson, Dr.John C Maxwell, Marshall Goldsmith, Robert Kiyosaki, T harvEker, Blair Singer, Steve Wozniak ( Apple co-Founder), Marshall Thurber, Joel Bauer အစရှိသည့်
မာသင်သည် လူမှုအကျိုးပြုစွန့် ဦးတီထွင် ( Social Entrepreneur ) တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ (Investor) တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။
ဘ၀တိုးတက်မှုအတွက် လေ့လာမှုသည် အဓိက ဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ အများအကျိုးအတွက် စီးပွားရေးအကြောင်း၊ ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စသော အသိပညာများကို မျှဝေသည်။
ဒေါ်ပို့ ပို့ ကြည်
ဒေါ်ပို့ ပို့ ကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ပုဂလိက တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Imperial University ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ သူမ၏ ယုံကြည်သောအိမ်မက်ဖြစ်သည် Myanmar Imperial University အစဖြစ်သော သင်တန်းကျောင်းလေးတစ်ခုကို အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင် မြန်မာငွေ ၁၈ သိန်းဖြင့် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Be our guest if you would like to achieve …
Find your personal breakthrough and discover the steps needed to creating lasting change in your life.
Market yourself or your business likeamaestro. Improve your strategies, transform your entire marketing approach and uncover new profitable revenue sources.
“Leadership Is Influence: Nothing More, Nothing Less” If you want to beaprofessional in Mindset Mastery, Money Mastery and Business, you must need to know and lead others.
Withavision to ” Empower Leaders in Myanmar”, we hope to share this vision with your organization.We have Sponsorship package which are available for you and would welcome an opportunity to help Myanmar together.
[show-logos orderby='none' category='0,2,4,5,1,3' activeurl='new' style='normal' interface='grid4' tooltip='false' description='false' limit='0' padding='10' filter='enhance' ]